Obodo ndị Canada nwere ihu igwe kacha mma | Njem zuru oke
Canada bụ obodo buru oke ibu, nwere ụdị ọdịdị dị iche iche na odighi otu onodu igwe Canada.Mpaghara ndị dị n'ụsọ mmiri dị iche na mpaghara ugwu na ugwu ndị dị na ọdịda anyanwụ, yabụ ọnọdụ okpomọkụ na oge anyị nwere ike ịchọta n'otu ụbọchị na saịtị dị iche iche dị iche na mpaghara oke ọhịa dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. ¿Kedu obodo ndị dị na Canada kachasị atụ aro ka ị gaa dika oge nke afọ?
Mee ruo Septemba bụ oge oge ndị Canada na-eme njem nlegharị anya maa ụlọikwuu na njem n'èzí; Ọnwa ọ bụla na ụbọchị ndị ahụ ị nwere ike ịga njem ebe ọ bụla na-atọ ụtọ n'agbanyeghị, na-amalite inwe mmụba na okpomọkụ, ebe ọ bụ na ha yiri ka ha na-agbanwe na ahịhịa ndụ, nke bụ ebe mbụ ọ na-ekpo ọkụ na mbido afọ na ga-adị ọkụ karị ma e mesịa, ịbụ skai na snowboard oge n'etiti November na March, ma enwere ike ịgbatị ruo Eprel dabere na mmiri ozuzo na / ma ọ bụ oké ifufe.
1 Eziokwu dị ịtụnanya banyere ihu igwe Canada
2 Obodo ndị dị ọkụ na Canada n’oge udu mmiri
3 N’oge ọkọchị? Obodo ndị Canada nwere ihu igwe kachasị oyi
Eziokwu dị ịtụnanya banyere ihu igwe Canada
Canada bụ obodo kachasị oyi, Na-asọ asọmpi Russia na nke mbụ dị ka mba kachasị oyi na ụwa, na-enwe kwa afọ kwa ụbọchị okpomọkụ nke -5 / -6ºC.
Ọtụtụ ndị Canada na-anwụ kwa afọ site na ihu igwe dị oke oyi karịa na ihe omume ndị ọzọ, dị ka data sitere na Statistics Canada. Ihe dị ka mmadụ 108 na-anwụ kwa afọ site na oyi, ebe naanị 17 na-anwụ maka ihe omume ndị ọzọ metụtara okike.
Nnukwu Banks nke Terranova a na-ewere dị ka kasị dịpụrụ adịpụ n'ụwa. Mpaghara ahụ bụ pacenti iri anọ na-ekpuchi n'ọzara n'oge oyi ma rue 40% n'oge ọkọchị.
Maka mba nke doro anya maara nke ọma maka ya Oge ohuruO yitụrụ ka ọ na-eju anya na ndị Canada bụ ndị mepụtara ntụgharị UV, ọ̀tụ̀tụ̀ nke ike anyanwụ radieshịọn dị n'akụkụ anyanwụ dị iche iche. Ka UV na-abawanye, ụzarị anyanwụ pụrụ imerụ akpụkpọ, anya, na usoro ahụ́ ọgụ ka ukwuu. Na 1992, Ndị ọkà mmụta sayensị gburugburu ebe obibi Canada mepụtara ndeksi dị ka ngwá ọrụ iji kpuchido ahụike nke ndị Canada, a na-ejikwa ya maka ihe dịka ọnọdụ 48 n'ofe mba ahụ.
Enwere okwu na Canada nke na-ekwu "Ọ bụrụ na ihu igwe adịghị amasị gị, chere nkeji ise." Ọ ga-abụrịrị na ọ ka njọ karịa na Onye nchacha Osimiri, Alberta; ebe edere mgbanwe mgbanwe okpomọkụ kachasị njọ na akụkọ ntolite Canada: mercury sitere na -19ºC ruo 22ºC n'ime ya naanị otu aka elekere.
Ọzọ anyị ga-ama nke bụ obodo kachasị ekpo ọkụ na Canada n'oge oyi ma ọ bụ nke oyi n'oge oge ọkọchị, yabụ anyị nwere ike ịhazi ụzọ anyị dabere na oge nke afọ anyị gara mba ahụ.
Obodo ndị dị ọkụ na Canada n’oge udu mmiri
Chọta ihu igwe na-ekpo ọkụ n'oge oyi nke Canada, nnukwu obodo anyị nwere ike ịchọta n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Ugwu Rocky, nke na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi zuru oke iji jigide okpomọkụ anyanwụ n'oge ọnwa ndị a, oge atọ, nnukwu obodo atọ dị na ndịda ọdịda anyanwụ british columbia zuru okè ịchọta ihe anyị na-achọ bụ: Victoria, Vancouver na Abbot.
Na obodo ndị a nke Canada mgbe niile Anyị ga-ahụ oge oyi ma dịkwa nwayọ nwayọ karịa n'ọtụtụ akụkụ nke mba, ụbọchị ole na ole na ntu oyi na abalị na-enwe obere okpomọkụ.
N'akụkụ ndị ọzọ nke Canada, obodo kachasị ekpo ọkụ maka oge oyi dị na Mpaghara Canada nke Ontario na ógbè mmiri. N'etiti ha, Obodo Ontario nke Toronto, Windsor na St. Ndị Katọlik, nke kwụpụta maka inwe ihu igwe oyi mgbe niile na-ekpo ọkụ karịa ndị ọzọ.
Victoria, bụ undisputed na-eduga obodo n'etiti obodo ukwu na Canada maka okpomọkụ n’oge oyi. Ọ dị ọtụtụ ogo na ụbọchị karịa ndị ọzọ n'ihi ihu igwe na-ekpo ọkụ. Victoria bụ naanị obodo Canada buru ibu buru ibu iji mee ka ọnọdụ okpomọkụ ghara ịdalata -10 Celsius (14 degrees Fahrenheit) n'oge oyi.
N’oge ọkọchị? Obodo ndị Canada nwere ihu igwe kachasị oyi
Saint John nke Newfoundland Ọ bụ obodo Canada kachasị mkpa ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka obodo ndị nwere ihu igwe dị jụụ n'oge ọkọchị. O nwere ọnọdụ okpomọkụ kachasị dị ala kwa ụbọchị ma na-enweta ụbọchị ole na ole nke ụbọchị ọkụ ọkụ na ọnwa nke June, July na August.
Ọhụrụ brunswick, abụghị nnọọ ihe ọzọ nke obodo kacha ibu na Canada, ma a na-ejikwa ya mee ka ọnọdụ okpomọkụ okpomọkụ mee ka ị gbakọọ ala kachasị ala na mba na ụbọchị kachasị ọkụ.
Ọzọkwa anọgide na isi iri nke njirisi niile eji mara ma obodo aga enye anyi "Oge oyi" bụ Calgary, Alberta; Edmonton, Alberta na Victoria na Vancouver dị na British Columbia. Obodo ndị Canada gụnyere na ọkwa ndị a bụ obodo ukwu kachasị ukwuu na mba ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Obodo ndị Canada nwere ihu igwe kachasị mma
Lourdes Rizo kwuru dijo
Ndewo, enwere m mmasị ịga ọrụ na Victoria, Amaghị m ma enwere ike.
Zaghachi Lourdes Rizo
Carmen Morales onye nhazi ihe oyiyi dijo
Abụ m nwanyị Mexico nke udo
Enwere m ikike ịga Canada
Amaghị m onye ọ bụla nwere ike ịkwado m na-anọ mgbe m na-achọta ọrụ biko !!
Zaghachi Carmen Morales
Anyị ga-achọ ibi na Kanada. Di m bụ ọkàiwu. Abụ m onye na-akwụ ụgwọ na anyị nwere ụmụ 3 gbara afọ 17 na 14 na nwa ọnwa 4. Kedu ihe bụ ohere?
Zaghachi María López
Fabiana, m na onodu gi a, obodo ebe i si? A na m eche echiche iga Canada mana ihe na enye m nsogbu bu na i nweghi onye ebe. Agbanyeghị, ọ ka bụ mba mepere emepe
Ndewo, a bụ Miilena si Bolivia nke ọrụ ing. Azụmaahịa m na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego na enwere m nnukwu mmasị ịga Canada n'ihi na enwere ọdịnihu akụ na ụba ka mma maka ndụ m na nke nwa m nwoke, eziokwu bụ na ebe a na Bolivia anaghị eji onye ọkachamara akpọrọ ihe, ụgwọ ọnwa dị obere o zughi oke iwulite ulo nke aka gi.
Ọ ga-amasị m ibi na ịrụ ọrụ na Ontario na obodo ọ bụla dị na Toronto, Windsor na Catharines
Zaghachi to ELDY MILENA BASCOPE CASTRO
Lizbeth onyinye dijo
Enwere m mmasị ịga Canada ibi na ịrụ ọrụ Abụ m onye ọkachamara mahadum na afọ 57 na mba m n'oge a ị gaghị enwe ike ịnweta ọrụ ọ bụla dịka di m na nwa nwoke n'okpuru 17 afọ otu esi mata ihe mee
Zaghachi Lizbeth Engel
Onyekachukwu Elvy Del Carmen Doria Ll dijo
Ọ ga-amasị m isoro ezinụlọ m biri na Canada, gịnị ka m ga-eme?
Zaghachi Elvy Del Carmen Doria Ll
Uchechukwu okeke dijo
Mgbede, abụrụ m onye Colombia, aha m bụ Jhon na abụ m onye nkuzi na-arụ ọrụ na onye njikwa ọrụ.Abụ m afọ 48 na nwunye m dị afọ iri atọ na otu, anyị nwere obere ụmụaka abụọ. Anyị ga-achọ ịga Canada. Ohere enwere enwere?
Zaghachi Jhon jairo garcia
Okenye Paris dijo
Abụ m onye Mexico / Spanish bi na Mexico nwere mmasị ịchọta ọrụ ọkwá nkà, (kpọọ ya iwu ma ọ bụ arịa ụlọ). M nwere 12 afọ ahụmahụ.
Vancouver ma ọ bụ Toronto bụ ebe kachasị amasị m, mana m na-emeghe mpaghara ọ bụla ọzọ.
Enwere m ekele maka azịza ọ bụla.
Zaghachi Paris Antoniano
Ndewo m achọrọ m ịga rụọ ọrụ na Canada ka a kpọtụrụ m
Zaghachi Diana Duran